Orinasa maitso : miaro ny tontolo iainana ny DHL | NewsMada
Orinasa maitso : miaro ny tontolo iainana ny DHL
Orinasa modely eo amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny DHL. Miainga amin’ny mpiasa sy ny timpon’andraikitry ny orinasa ny ezaka. Miara-miasa amin’ireo mpanodina akora azo havaozina izy ireo.
Nampahafantarina, omaly tetsy Ankorondrano fa miaro sy mihajy ny tontolo iainana tanteraka ny orinasa DHL. Amin’ny alalan’ny fanodinana ireo fako sy ambin-javatra avy nampiasaina no hanatanterahana izany.
Miara-miasa amin’ireo manam-pahaizana sy fikambanana manana tetikasa manodina ireo akora azo havaozina ny orinasa DHL amin’izany. Anisan’izany ny orinasa ecovillage de Madagascar izay manodina ny rano very ho azo ampiasaina.
Azo havaozina, ho azo hanondrahana sy hanasana fiara ny rano efa nampiasaina mba tsy ho verivery fotsiny. Azo ampiasaina ihany koa ny ranon’orana hamatsy ny tokantrano sy ny orinasa.
Ankoatra izany ny fikambanana manodina taratasy. Eo koa ireo tavoahangy plastika ho azo hatao haingon-trano na fanaka mihitsy aza. Ny fikambanana sasany maka ny poti-tsakafo ao amin’ny toeram-pisakafoan’ny DHL hatao zezika.
Tanjona ny fiarovana ny tontolo iainana. Mila miainga amin’ny tsirairay anefa ny ezaka ahitana fahombiazana. Mitaky fanovana toetsaina miainga amin’ireo mpiasa ao amin’ny orinasa izany. Orinasa tompon’andraikitra no tanjona.
Nampahafantarina omaly ihany koa ny fitaovana mari-pamantarana ny loton’ny rivotra amin’ny toerana iray (Airbeam) izay natolotry ny orinasa DHL ny minisiteran’ny tontolo iainana.